अभिमत: वाईसीएलको चन्दा प्रकरण र एसपीको अडान
वाईसीएलको चन्दा प्रकरण र एसपीको अडान
कम्युनिष्ट नेता माओत्सेतुङले आफ्ना अनुयायीलाई सधैं भन्ने गर्थे–‘जबर्जस्ती चन्दाका नाममा जनताका घरबाट सियो पनि लिनुहुँदैन ।’ यो माओवाणी भने यतिबेला उनैका अनुयायीहरुले बिर्सिएका छन् । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने ‘एमाओवादी’का कार्यकर्ताले यो माओवाणीलाई व्यवहारमा उतारेका भए ‘वाईसीएल’को चन्दा प्रकरणबाट यो हप्ता चितवन वन्द हुनेथिएन । पछिल्लो समय फेरि बन्दका नाममा चितवनका जनता सास्तीका साक्षी बन्ने थिएनन् । अन्ततः आफ्ना माग पुरा गर्ने नाममा वाईसीएलले गरेको बन्दका कारण यहाँका शिक्षण संस्था, उद्योग कलकारखाना, यातायात र व्यापार व्यवसाय पहिलेकै परिपाटीमा बन्द भए । सास्ती आम जनताले पाए । बन्दबाट एउटा चरणको अन्त्य भएपनि प्रवृत्तिको अन्त्य भने भएन । पटक पटक भईरहने बन्दबाट सरोकारवालाहरुका बीचमा क्षणिक समाधान देखिएपनि प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदा फेरि अबका दिनमा यसैगरि बन्द नहोला भन्न पनि सकिन्न ।
साउन १५ गते मंगलबार नारायणगढको पुतलीबजारमा एमाओवादी निकट वाईसीएलका कार्यकर्ताहरु आफ्नो जिल्ला सम्मेलनका लागि चन्दा उठाउन एक व्यापारीकहाँ गए । साउन ७ गते निर्वाचन आचारसंहिता लागु भईसकेको थियो । मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयरहित वातारणमा सम्पन्न गर्नका लागि एमाओवादी अध्यक्षले काठमाडौंमा निर्वाचन आचारसंहिताको स्वागत गरेका थिए । उनी भन्दै थिए,‘एमाओवादीले हारे केही छैन । तर मंसिर ४ को चुनाव चाहिँ जसरी पनि सफल हुनुपर्छ ।’ प्रचण्डले भनेझैं मंसिर ४ को निर्वाचन साच्चै सफल गराउन त निर्वाचन आयोगले लागु गरेको आचारसंहिता सबै राजनीतिक पार्टीले अक्षरस पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुलाई साक्षाी राखेर निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिता पालना गर्ने पं्रतिवद्धता जनाएको केही दिनमै उनका कार्यकर्ता व्यापारीसंग चन्दा असुल्न गए । ती व्यापारीले ‘स्वेच्छिक’ रुपमा आफूखुशी सक्दो सहयोग गर्न चाहन्थे । तर वाईसीएलका कार्यकर्ताले मानेनन् । उनीहरुले जिल्ला सम्मेलनका लागि ‘जवर्जस्ती’ बढि चन्दाको माग गरे । व्यापारीले दिन सकेनन् । यो कुरा ‘गोप्य सूचना’का आधारमा प्रहरी प्रशासनले थाहा पायो । प्रहरी त्यहाँ पुगेर ‘जवर्जस्ती चन्दा’ असुलिरहेका वाईसीएल कार्यकर्तालाई समात्यो । अन्ततः प्रहरीको घेराभित्र उनीहरु परे । प्रहरीले समातेर लगेको रिसमा प्रहरी कार्यालयको हाताभित्रै प्रहरीसंग उनीहरुको घम्साघम्सी प¥यो । प्रहरीले वाईसीएलको मुक्का खाए । प्रहरी सहायक निरीÔक हेमन्तकुमार सिंह र प्रहरी जवान मनोजकुमार चौहान गम्भीर घाईते भए ।
वाईसीएल कार्यकर्ताहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगियो । योे खबर सनसनी भएपछि प्रहरी कार्यालय हाताबाहिर वाईसीएलका थप जवानहरु आइपुगे । आफ्ना साथीहरुलाई छुटाउन उनीहरुले भरमग्दुर प्रयार गरे । केन्द्रबाट नेताको फोन सिफारिस गरे । तर कसैको केही लागेन । भोलीपल्ट बुधबार पनि कार्यकर्ता नछुटेपछि अनिश्चितकालीन भन्दै चितवन वन्दको आयोजना भयो । तर अचानक गरिएको बन्द २ घण्टाभन्दा बढि टिक्न सकेन । प्रहरी प्रशासन अझ आक्रामक भएजस्तो देखियो । उता वाईसीएलले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला इञ्चार्जले भने–‘चन्दा उठाउँदा हाम्रा साथीलाई प्रहरीले लग्यो भन्दैमा अरु पार्टीले खुच्चिङ नभने हुन्छ । उनीहरुलाई पनि व्यापारीको चन्दा चाहिन्छ । उनीहरुको पनि पालो आउँछ ।’ योसंगै बुधबार साँझसम्म आफ्ना कार्यकर्ता नछाडे बिहीबारबाट भने अनिश्चितकालका लागि वाईसीएलले चितवन बन्द गर्नेभयो । तर प्रशासनले वाईसीएलका कार्यकर्तामध्ये ४ जनालाई चन्दा ऐन र २ जनालाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्धा दर्ता गरिसकेको थियो । अवस्था यस्तो बन्यो कि प्रहरी प्रशासनले चाहेर पनि कार्यकर्ता छुट्न सकेनन् । वाईसीएलले चाहेर पनि वन्दलाई अगाडि बढाउन सकेनन् ।
बिहीबारको चितवन बन्द भने सुरु भयो । जर्वजस्ती चन्दा उठाउ“दै हिंडेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाइका लागि दवाव दिन एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताले चितवनका विभिन्न कार्यालयमा तोडफोड गरी बन्दको सुरुवात गरे । चितवन भएर देशभर आवातजावत गर्ने सवारी साधन चल्न नसक्दा यात्रु मारमा परे । बजार पसल, र शैÔिक संस्था बन्द गराए । चन्दा नपाउँदा उत्पनन विवादले गरिएको बन्दमा अन्ततः ‘स्कूले भुरा’ देखि आमजनता पेलिए । हाकिमचोकमा बिरामी बोकेको एउटा एम्बुलेन्स समेत तोडफोड भयो । सुत्केरी व्यथाले च्यापेर अस्पताल आएकी ती बिरामी वाईसीएलको एम्वुलेन्स तोडफोडले अत्तालिइन् । कार्यालय बन्द गराउंदै हिंडेका कार्यकर्ताले रत्ननगर नगरपालिकास्थित नेपाल टेलिकमको शाखा कार्यालय तोडफोड गरे । विद्युत प्राधिकरण टां“डी शाखाको कार्यालयमा जबरजस्ति प्रवेश गरी कागज पत्र नियन्त्रणमा लिएर च्यातिदिए । प्रहरीले तोडफोडमा संलग्न थप १५ जना वाईसिएल कार्यकर्तालाई पक्राउ ग¥यो । एकछिनसम्म कसैको दवाव र प्रभावमा नपरेको प्रहरी प्रशासन साँझ भने प्रभावमा परिहाल्यो । सार्वजनिक अपराधमा मुद्धा दर्ता भएका कार्यकर्ता बिहीबार नै छुटे । अरुलाई ‘कागज मिलाएर’ भोली पल्ट छाड्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बचन दिए । अदालत पुगिसकेको मुद्धा पनि दवाव र प्रभावमा साम्य भयो । अर्थात् वाईसीएलको चन्दा प्रकरणले प्रहरी प्रशासन र वाईसीएल कार्यकर्ताबीच अघोषित सम्बन्ध बन्यो–‘तँ रोएजस्तो गर । म कुटेजस्तो गर्छु ।’
वाईसीएलका कार्यकर्ता छुटाउन २ जनाले जनही १ हजार र ४ जनाले जनही ५ सय धरौटी बुझाउनुपर्ने भयो । यो धरौटी बुझाएर छुटेपछि नारायणगढमा विजय जुलुस निस्कियो । प्रहरी प्रशासनमा परेका कार्यकर्ताहरु ‘विजयी’ बने । सरकारी निकाय हा¥यो । व्यवसायीलाई भने झनै त्रसित बनाउने वातावरणको सिर्जना भईदियो । डेढ दिनको चितवन बन्दको जरिवाना ४ हजार बुझाएर वाईसीएल कार्यकर्ताले छुटकारा पाएजस्तै भयो । अघिल्लो दिनसम्म राज्यले ‘अपराधि’ भनेकाहरु भोलिपल्ट राजनीतिक आडमा ‘बाघ’ जस्ता भए । लाग्दैछ, अब उनीहरुलाई कसैले पनि छुन सक्दैन । समाजमा जस्ता गल्ती गरेपनि राजनीतिक आडमा छुटकारा पाइने रहेछ । अरु पार्टीका मान्छे पनि यसमा खासै विरोध गर्दारहेनछन् । किनभने वाईसीएल इन्चार्जले भनेझैं ती पार्टीका पनि अधिवेशन आउँछन् । सम्मेलनमा कार्यकर्तालाई मासुभात खुवाउन परिहाल्यो । परिआए ‘भाडाका कार्यकर्ता’ पनि बनाउनुपर्छ । अनि यसका लागि पैसो हो । त्यो पैसो दिने व्यवसायी हुन् । अहिले वाईसीएललाई चन्दा दिनेहरुबाट आफूले पनि कुम्ल्याउनैपर्छ । यसैले व्यवसायीको विरोध गरेर पनि काम छैन । वाईसीएलको समर्थन गरेर पनि अर्थ छैन । मौन बस्यो, आनन्दै । संस्कृतमा भनेझैं ‘मौनम् सम्मत्ति लक्षणम्.....।’ अर्थात्, मौन बस्नु नै स्वीकृतिको लक्षण हो । यसपालि चितवनका राजनीतिक दल र उसका भातृसंगठनले त्यही गरे ।
निर्वाचन आचारसंहिता लागु भईसकेपछि चन्दा उठाउनु हुन्थेन । काठमाडौंमा प्रचण्डले आचारसंहितालाई ताली बजाएर स्वागत गरिसकेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि यो कुरा बुझाएर ताली बजाउन लगाउनुपथ्र्यो । तर चितवनमा यसको विपरित भयो । अझ कतिपय अन्य ठाउँमा अरु पार्टीले पनि सहजै व्यापारीसंग चन्दा उठाएका होलान् । चितवनमा प्रहरीले थाहा पायो । अनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने आँटसम्म ग¥यो । चितवन प्रहरीलाई यसका लािग धन्यवाद दिनैपर्छ । तर यसपछिका घटनाक्रममा अदालत र स्वयम् प्रहरी प्रशासनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातारणमा राजनीतिक पार्टीबाट अवरोध आइदिंदा मंसिर ४ को चुनावसम्म अब कस्तो निष्पक्ष र भयरहित चुनावको अपेक्षा गर्न सकिएला ? के यस्ता घटनाले प्रहरी प्रशासन सक्रिय हुन्छ ? रमाइलो त आफ्नै कार्यकक्ष र कार्यालयमा धमाधम ‘युद्धकाल’ मा झैं आँखै फुटिनेगरि पिंटिदा समेत प्रहरी मुकदर्शक बनेर बस्नुपरेको छ । चन्दा प्रकरणमा वाईसीएलका कार्यकर्ता मात्रै दोषी छैनन् । दोषी त ती हुन्, जसले राजनीतिक भ¥याङका रुपमा सधैं युवाहरुलाई प्रयोग गर्छन् । एकातिर राज्यसंग सम्झौताको नाटक गरेर हात मिलाउँछन । अर्कोतिर आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यही सम्झौताको विरोधमा उक्स्याउँछन् र चितवनमा झैं निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध व्यापारीकहाँ चन्दा उठाउन अभिप्रेरित गर्छन् । ‘जस्तासुकै अपराध गर, छुटाउने त हामी छँदैछौं’ भनि युवाहरुलाई अपराधतर्फ उन्मुख गर्छन् ।
मंसिर ४ मा हुने भनिएका निर्वाचन नजिकिएको छ । निर्वाचन आयोगले धेरै आचारसंहिता बनाएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको अवस्थामा निर्वाचन कार्यक्रमबाट वञ्चित गराउनेसम्मका अधिकार आयोगको छ । तर यसपालि वाईसीएलले जस्तै अबका दिनमा चितवनमै अन्य राजनीतिक दल र उसका भातृसंगठनले चन्दा नउठाउला भन्न सकिन्न । वाईसीएलले जस्तै एमालेको युवा संघ र कांग्रेसको तरुण दलले व्यापारीबाट चन्दा उठाएको थाहा पाएपछि उनीहरुलाई थुन्ने अनि सार्वजनिक अपराध र चन्दा ऐन अन्तर्गत कारवाही साहस चितवन प्रहरीसंग छ कि छैन ? अहिलेका प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्कीले वाईसीएललाई झैं कारवाही गरी अर्को चितवन वन्दको सामना गर्न तयार छन् कि छैनन् ? प्रहरी भएपछि जस्तोसुकै सामना र साहस गर्न पनि सक्षम हुनुपर्छ । कार्की पनि त्यही भन्छन् । राजनीतिक आडमा हुने गुण्डागर्दीसंग उनी निकै परिचित छन् । शान्ति सुरक्षाका सवालमा कोहि कसैसंग सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छन् । यसैले तत्काल चितवनमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुसंग उनले बेलैमा छलफल गरुन् । अबका दिनमा कसैसंग जवर्जस्ती चन्दा उठाउन नहुने र उठाएमा जस्तोसुकै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार आफूलाई भएको कुरा ती राजनीतिक दललाई उनले बुझाउनु जरुरी छ । अन्यथा फेरि पनि अरु दलले चन्दा उठाउनेछन् । प्रहरीको फन्दामा नपरे त भैगो । फन्दामा परिहाले चितवन प्रहरी प्रशासन र यहाँका जनताले फेरि बन्दको सामना गर्नपर्ला ।
विराटनगरमा पत्रकार खिलानाथलाई कुटेको आरोपमा त्यहाँका ‘डन’ भनिने पर्शुराम बस्नेतलाई ‘तह’ लगाउने अहिलेको चितवन प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्की हुन् । चितवनमा शान्ति सुरक्षा विग्रँदा यहाँका राजनीतिक दलहरुले उनै कार्कीलाई सम्झन्थे । समयक्रमसंगै कार्की १४ गते सोमबारबाट चितवन आए । तर भोलीपल्टदेखि नै कार्कीलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ लाग्यो । यो ढुंगा उनले निल्न पनि सकेका छैनन् । ओकल्न पनि सकेका छन् । यद्दपि अपराध र राजनीतिलाई फरक ढंगले हेर्ने उनको नजर व्यवहारमा लागु हुनु आवश्यक छ । वाईसीएलको चन्दा प्रकरणमा खस्किएको उनको अडान सधैं कायम हुने हो भने अर्को राजनीतिक दलको युवा संगठनले फेरि उही कुरा दोहो¥याउँछ । उसैगरि चितवनका जनता बन्दका शिकार हुनेछन् । व्यापारीहरु चन्दा दिएरै रित्तिनेछन् । विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउनेछैनन् । काम गर्नेले काम गरेर माम खान पाउँदैनन् । अन्ततः चितवनको शान्ति सुव्यवस्थाले झनै भताभुङ्गको उपहार पाउनेछ ।
२०७० साउन २२ गते मंगलबार चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’बाट
Labels: आफ्नै लेख, राजनीति, विचार
Asia Explore Adventure & Travel October 21, 2013 at 5:50 PM
realestatesolutation nepal November 12, 2014 at 6:26 PM
Adams Kevin November 13, 2014 at 7:36 PM